Malunga neLeacree - LEACREE (Chengdu) Co., Ltd.
I-LEACREEIkomkhulu e Chengdu, China
Ikomkhulu le-LEACREE likwisiXeko saseChengdu, esiye saba sisixeko sesithathu eTshayina.Ikwadume njengeepanda ezinkulu ezintle.
Kummandla wesizwe wophuhliso loqoqosho nobuchwepheshe kwisiXeko saseChengdu, umzi-mveliso we-LEACREE unemveliso ecocekileyo, i-R&D kunye neendawo zokuvavanya iindlela ezingaphezulu kwe-100,000 yeemitha ezikwere zemitha ezine-workshop yokuvelisa imodem kunye nenani elikhulu lezixhobo eziphucukileyo zomgca wemveliso yobungcali.
Ngaphezu kweminyaka engama-20'amava
I-LEACREE ivelisa iintlobo ngeentlobo zamacandelo okutshintshwa kwe-aftermarket kuquka ii-assemblies ezipheleleyo ze-strut, izinto zokufunxa ukothuka, imithombo yekhoyili, ukumiswa komoya, ukunqunyanyiswa okusezantsi/izixhobo zokuphakamisa kunye nezixhobo zokuxhoma ezenzelwe oko.Ezi mveliso ziya kubuyisela isithuthi sakho kwindlela yokuqhuba entsha.
Kwa-LEACREE, uya kufumana iqela labantu abanomdla kunye nabanobuchule abafuna ukwenza ezona mveliso zibalaseleyo emhlabeni eziya kukunika iprimiyamu yokuqhuba intuthuzelo kunye nokhuseleko.
LEACREE THEYERS IQEMBU
Ngo-2008, iNkampani ye-LEACREE US yasekwa eTennessee, eMelika.Ukusukela ngoko, iNkampani yeLeacree izibophelele kuMntla waseMelika kwaye ibonelela ngenkxaso yenkonzo yabathengi kubo bonke abathengi bethu abaxabisekileyo.
Njengomvelisi ophambili kunye nochwephesha weizothuso ze-aftermarket kunye ne-struts, I-LEACREE iqhubeka nokuphuhlisa iimveliso zolawulo lokukhwela.Sinabathengi abathembekileyo ngakumbi kwihlabathi liphela kwaye uphawu lwe-LEACREE luye lwaba sisithethantonye sokuqhuba okukhuselekileyo, okutofotofo kunye nokulawulwayo kubanini bezithuthi.
Siyazingca sikhonza kumazwe angama-50 kwaye sibala.Abasasazi bethu bagubungela ihlabathi.
Ngeendawo ezininzi zokugcina iimpahla kulo lonke elaseAsia, kuMntla Merika naseYurophu, sineendawo ezifanelekileyo ozifunayo!
Air Suspension Strut Gqibezela iiStruts China Shock Absorbers Ukothuka okunokulungiswa IShock Absorber yeMoto Gqibezela iNdibano yeStrut